Ampasampito: enin-dahy nirogo basy nanafika fivarotana | NewsMada
Ampasampito: enin-dahy nirogo basy nanafika fivarotana
Miseho lany ny asan-jiolahy amin’izao fety izao. Teny Ampasampito, Ankadifotsy… Mitam-basy avokoa ireo mpanao asa ratsy ireo.
Notafihina enin-dahy nirongo basy ny toeram-pivarotana iray teny Ampasampito, ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 8 ora alina. Ny sasany tamin’ireo niditra tao am-pivarotana, ary ny hafa niandry tety ivelany. Ny basy amin’io mirangaranga sady mandrahona. Tao anatin’ny fotoana fohy nisehoan’ny fandrobana, lasa nitsoaka nandeha an-tongotra ireo jiolahy. “Tsy nisy nahetsika ny olona fa nitazam-potsiny. Efa za-draharaha ireo jiolahy ary nandrahona sy nampatahotra izay nijery azy ireo miaraka amin’ny basy. Nitsoaka mora foana avy eo”, hoy ny fitantaran’ny olona teny an-toerana.
Nisy polisy teny an-toerana ka nanenjika avy hatrany rehetra nantsoin’ny olona, saingy niala maina ireo. Dify tany anaty haizina ireo jiolahy nirongo basy. Niverina nijanona teo amin’ny toerany teo Ampasampito eo amin’ny “rond point” ny polisy avy eo. Mitaraina ny olona amin’iny faritra iny satria matetika misy asan-jiolahy, ankoatra ny firongatry ny mpanendaka.
Nisehoana fanafihana mitam-basy koa teny Ankadifotsy ny faran’ny herinandro teo. Nisy ny fikarohana nataon’ny polisy ka efa-dahy voasambotra, ny alatsinainy teo. Mandeha ny famotorana azy ireo amin’izao. Anisan’ny faritra mafana amin’ny asa ratsy koa ny eny an-toerana. Mampitaraina ny olona ny halatra finday anaty taxi-be eny Besarety sy ny manodidina. Tazanin’ny olona fotsiny anefa ireny jiolahy ireny matetika. Na matahotra na miray tsikombakomba.